Ukuphefumula kwimilebe ephezulu
Phantse yonke intokazi yesibini ineenwele ngaphezu komlomo wayo ophezulu. Kodwa kwezinye, azibonakali, kwaye umntu ukhangeleka njengama-mustaches, abantu abaninzi baqala ukukhangela iindlela zokulahla le nkathazo encinci. Kuza kubekho, kuninzi iindlela ezahlukeneyo zokugqithisa iinwele phezu komlomo ophezulu kunye nolwazi olugqithiseleyo kukugqithisa. Ingqwalasela yakho iboniswe kwiindlela zokuphefumula, ongakwazi ukuzenza ngokuzimela ekhaya.
Ukuba awukwazi ukunyamezela intlungu okanye ungabi naso ixesha lokujongana nale ngxaki, uya kuza kuncedisa i-cream epilation. Kodwa kufuneka uqikelele ukuba ngale ndlela ungasusa iinqwelo ezimbini okanye iiveki ezintathu kwaye inkqubo kufuneka iphindwe kwakhona. Akunconywa ukusebenzisa le mveliso yabasetyhini abanesifo esicalukileyo okanye abanamathele ekubonakalisweni kwempawu, kuba ukubunjwa kwesilwanyana kubandakanya i-calcium thioglycollate okanye i-sodium, i-calcium. Ngaphambi kokuba usebenzise, ​​vavanya kwindawo encinane yesikhumba.
Ukuba uneenwele ezimbalwa, ngoko unokuzicima nje usebenzisa izixhobo ezilula. Le nkqubo kufuneka yenziwe emva kokuhlamba, njengoko ulusu luba ludla, kodwa ke, ixabiso elincinci lokuncinwa kufuneka lifakwe kwikhumba. Musa ukususa ngokukhawuleza zonke iinwele, njengoko ulusu luya kuba lukhulu kakhulu kwaye luya kubonakala ukuba ufuna ukulahla i-antennae.
Enye yezindlela ezithandwa kakhulu kwaye zikhululekile ukususa iinwele ezingafunekiyo ngaphezu komlomo ophezulu u-spiral epilation. Ingundoqo yile ndlela kukuba uluhlu lwe-wax lusetyenziswa kumgangatho wesikhumba, emva koko lukhutshwe ngentshukumo enye ebukhali, ngokubhekiselele ekukhuleni kweenwele. Akukhawulezi nje ngokukhawuleza, kodwa kunye nenkqubo elula, kodwa, nangona kunjalo, kukho enye impendulo ephawulekayo - ulusu luba lukhuni, ubomvu okanye ukucaphuka kubonakala. Ngako oko, ungasebenzisa le ndlela kuphela ukuba awuyi kuhamba naphi na namhlanje nangomso.
Ukuba uthatha isigqibo sokususa iinwele ezilungileyo kwaye ungaphinda ubhekane nale ngxaki, i-electrolysis iya kukunceda. Ngethuba le ndlela, inwele nganye isuswe ngokufika kwerhafu ekhoyo ekhoyo esonakalisa inkoliso yeenwele, kodwa le nqubo iyenziwa kuphela kwiironons ezihle. Le ndlela inemiphumo embi kakhulu - yindleko ephezulu kwaye ingozi yokutshatyalaliswa kombane.
Ukukhishwa kweenwele zelisi enye yeendlela ezilungileyo zokususa iinwele ezingafunekiyo. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba le ndlela ifanelekile kuphela kwimantombazana enesikhumba esilungileyo kwaye yenziwa kuphela ngabayingcali, kuba kunokwenzeka ukuba kufumane ukutshisa isikhumba. Isiphumo siya kuhlala kwiinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12. Ingozi ebalulekileyo yale ndlela yukungakwazi ukuphelisa ngokupheleleyo i-antennae ngokusisigxina.
Iingxaki zabesetyhini kwizesondo
Isobho se Squash
IHaroscope yesifo sesondo
Iseli yomlomo: njani ukulungiselela?
Indlela yokuphucula umbala kunye nokususa izangqa phantsi kwamehlo?
Indlela yokuba ngumkhwekazi omuhle?
Ukuqokwa kwamadoda: i-physiology yale nkqubo
Ukusetyenziswa kweqabunga le-bay kumachiza omntu
Ukususa i-moles nge-electrocoagulation
Ikhekhe leCoconut "I-Tenderness"
Yintoni yokupheka iKrisimesi-2017: 4 iresiphi enomnandi yokutya okunyamekileyo kwixesha leKrisimesi
Kunobungozi ukutshaya ngexesha beluncelisayo
Ukukhetha i-TV yindlela yokuzonwabisa
Ikhekhe leshokoledi kunye nesinamoni
Isaladi kunye neelenti kunye ne-feta cheese
Susa ukukhathala nokuvuvukala kwiinyawo
Ukukhawuleza ukubeka iinwele ngendlela
UDuracell - iqabane elisemthethweni le-movie "Iimfazwe zeNkanyezi: Ukuvusa amandla"
Umntwana ongeyena umhlobo nabanye abantwana
Agar-agar okanye isongezelelo sokutya E 406: izakhiwo, isicelo kwiyeza kunye nokulahleka kwesisindo
Ifilimu "ama-shades ama-50" ayenokuba yimbi yefilimu eyingozi kakhulu ka-2015
Ibiskiti enekhamera yemonom kwi-multivark